Homeसमाचारकस्तो अचम्म – दुवै हात छोडेर संसार चकित पार्दै यी युवा, यस्तोसम्म गर्न सक्छन हेर्नुस बासुरीबाटै बाइकमा यस्तो(भिडियो)
January 15, 2021 admin समाचार 6770
तपाईलाई बाइक चलाउन आउछ ? वा तपाईको परिबारमा कुनै १ जनालाई त अबश्य बाइक चलाउन आउछ होला नी ? हैन र ? हो आज हामी यसैबारे अचम्मको कुरा गर्दैछौ । कुरा हो नुवाकोटका यि युवाको जो संगीत सिकाउदै आफूलाई यस क्षेत्रमा स्थापित गर्न पनि चाहन्छन ।
यिनको कला थाहा पाउदा जो कोही पनि अचम्म पर्छन । यिनको नाम हो रुपक बासुरी, बासुरी बजाएरै आफनो छुट्टै अस्तित्व या भनौ पहिचान बनाएका कारणले यिनले आफनो थर पनि बासुरी राखेका छन ।
यिनको अचम्मको कला के छ भने यिनी बाईक चलाउदै संसारमै कसैले नगरेको काम बासुरी बजाएर गिनिज बुकमा नाम लेखाउने तयारीमा पनि छन । त्यसैले अहिले हामीलाई पनि डेमो देखाएर चकित पारेका छन । तपाईले यो भिडियोमा पुरा हेर्न पनि सक्नुहुन्छ कि यिनी के सम्म गर्न सक्छन भनेर ।
आफूलाई धेरैले चिनोस भन्ने चाहने रुपक एकाएक चर्चामा आउन पाए झन खुशी हुने पनि बताउछन ।
मन थामेर यसरी बाइकमै दुबै हात छोडेर के सम्म गर्न सक्छन त ? —
January 22, 2021 admin समाचार 6744
March 16, 2021 admin समाचार 6071
January 31, 2021 admin समाचार 7530